သင်ယူမှုအတတ်ပညာ (မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သင်ယူမှုအတတ်ပညာ (မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ)
Posted by we R one on Jun 30, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
စာသင်သားဘ၀မှာ အချိန်ရဲ့အများစုကို စာကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးကြရပါသည်။ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ စာကျက်မှ စာမေးပွဲအောင်မည့်အတွက် မဖြစ်မနေကျုံးရုန်းကြရပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ စာမေးပွဲကျသည့်အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အမှတ်နည်းသည့်အခါမျိုးတွင် လူကြီးမိဘတွေက “ကျမှာပေါ့ စာ မှ မကျက်ဘဲကိုး။´´ ဟုကြိမ်းမောင်းခံရသည်။ တစ်ချို့တွေက လည်းပြောကြသည်။ “ကျွန်မကတော့ ကျက်တာပဲ။ ဥာဏ်က သိပ်မကောင်းတော့ ကျက်သမျှ မမှတ်မိဘူး။ ´´ “စာမေးပွဲခန်းထဲရောက် သွားတော့ ကျက်ထားတာတွေမေ့ကုန်ရော။ ´´
မှတ်ဥာဏ်ဆိုသည့်အရာကို ကျွန်တော်တို့က သဘာဝတရားကြီးနှင့်ရောထွေးထားတတ်သည်။ မွေးကတည်းက ပါလာသည့်အရာတစ်ခု၊ မိမိပြုပြင်ဖန်တီးဖို့ တတ်စွမ်းနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ဟု တွေးထင်တတ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်လည်း“သူကတော့ ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ ကျက်သမျှ အကုန်မှတ်မိတယ်။ ဒီကလေးကတော့ ခပ်ထုံထုံထဲကပါ။ ဘယ်လောက်ကျက်ကျက် စာမေးလိုက်ရင်မရဘူး´´ဟူသည့် မှတ်ချက်တွေ မကြာခဏကြားနေရတာပေါ့။
” P-P-P-P-P ! “
(Proper Planning Prevents Poor Performance)”
” A-B-C ! “
“Have P.R.I.D.E. in your work”
Read more: သင်ယူမှုအတတ်ပညာ (မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ) – Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A244434&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz1Qj3TAN5o
အဲဒါတော့ ဟုတ်မှာပေါ့.. ၁၀တန်း တုန်းက တက်တဲ့ ကျူရှင် ဆရာတွေက စာတွေကို အကုန် ကဗျာစပ်ပြီးတော့ အတန်းထဲမှာ အလွတ် ဆိုခိုင်းတာ.. စာတောင် သိပ်ကျက်စရာ မလိုဘူး။
အိမ်မှာ စာမကျက်လို့ ကျမယ် ထင်တာ မကျလို့ အံသြနေကြတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ … အဲ့ဒီဆိုက်မှာ အဲ့ဒီ အကြောင်းလေး ဖတ်နေတာ ။
ရွတ်ပါများလျှင် အလွတ်ရလွယ်ပါတယ်… နှုတ်တိုက် ကျက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုရားရှိခိုးတွေ ၊ မေတ္တာသုတ်တွေဆို … ရွတ်ပါများရင်း ရသွားခဲ့တာပါ ။
ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရမှ ကျနော်မှတ်ညဏ်ပြန်ကောင်းလာတယ် ….။
ကျနော်မှတ်ထားတာက we are one thousand . အခုမှ သတိပြန်ရတယ်
WeRone ကျနော့ဆီက ၁၀၀၀ ချေးထားသေးတယ်နော် ….. ပြေလည်ရင်ပြန်ဆပ်ပေါ့။
ဟဟ ဦးဖတ် မှတ်ဥာဏ် ပြန်ကောင်းဖို့နည်းနည်း လိုသေးတယ် ထင်တယ်။ မနေ့ က မှ ကျွန်မ ပြန်ပေးလိုက်တာ မလောက် လို့ 10000 ထပ်ယူသွားသေးတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အုံးနော်… :D
မှတ်ဥာဏ်ဆိုတာက အကန့်အသတ်ရှိတယ်ထင်ပါတယ် … memory ထဲမှာ လိုတာထက်ပိုသွားရင် ကျန်တာတွေကို auto delete လုပ်ပစ်လိုက်သလားမသိဘူး … အရင်ကအကြောင်းတွေ အကုန်မေ့သွားပြီ …. ဘယ်လိုမှ ပြန်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး …
တစ်ခါတစ်လေကျရင်လဲ သိပ်မှတ်မိတာ မကောင်းဘူးဗျ
ကွန်ပျူတာမှာ မမှတ်ချင်တော့တာကို shift/ delete ဆိုသွားရောပဲ
ဥဏှောက်မှာက ငါဒါကို မမှတ်ချင်တော့ဘူး ဖျက်လိုက်မယ်လို့ လုပ်လို့မရတာတွေရှိတယ်
ဥပမာ ၂x၂=၄ ဆိုတာကြီးကို မမှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုလဲ မရဘူး အဲဒါကြောင့် မလိုအပ်တာတွေ ခေါင်းထဲများများမရောက်တာကောင်းပါတယ်
အဓီက ကတော့ စိတ်ဝင်စားရင် ဘယ်လောက်ခက်ခက် မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်၊
တစ်ခါတလေ အရမ်းခက်တဲ့စာတွေက မမေ့တော့ဘဲစွဲနေတတ်ပြီး
မင်းသစ်တောင်မှ ထိုင်ငိုရမဲ့ BIO ကို သီချင်းလုပ်ရေးခဲ့သေးတယ်။